धन ठूलो कि मन ठूलो ? - Birat Sandesh
१ प्रदेश १: मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता
२ खनाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै
३ थ्री नेसन्स कपको उपाधि नेपाललाई, बंगलादेश २–१ पराजित
४ प्रदेश १: माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेतामा इन्द्र आङ्बो
५ इटहरीमा एक जनाको हत्या, एक पक्राउ
६ वायु प्रदूषणका कारण भोलिदेखि चार दिन देशभरका सबै शिक्षण संस्था बन्द
७ प्रधानमन्त्रीले राजनैतिक रूपमा बहुमत गुमाईसके: कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा
८ सुनिता खड्कालाई चेतनाको ‘आदर्श सन्तान’ सम्मान
९ कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार : कोइराला
धन ठूलो कि मन ठूलो ?
‘धन ठूलो कि मन ठूलो’ भनेर बेलाबेला बहस हुने गरेको छ । वास्तवमा धन हुनेको मन हुँदैन र मन हुनेको धन हुँदैन । एकादुईबाहेक धन हुनेको मन हुँदैन । पैसा कमाउँदै गएपछि अझै धेरै कमाउने लालजमा आममानिस पैसाको पछाडि कुदिरहेको हुन्छ । पैसाको पछाडि कुद्दा उसले समाज र आफ्नो विगतलाई बिर्सिने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि व्यक्ति आफैंमा धनी अर्थात् सम्पत्तिले पूर्ण भएर जन्मिएको हुँदैन । समाजका थोरै मानिसले अथाह पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गरेका हुन्छन् बाउ–बाजेबाट । अधिकांश मानिसले आफ्नै बलबुताले आर्थिक आर्जन गरेका हुन्छन् । दुःख र संघर्ष गरेर सामान्यभन्दा सामान्य मानिस पनि उद्योगी बन्न सक्छ । तर, हाम्रो समाज यति स्वार्थी भएको छ कि पैसा कमाउन थालेपछि विगतलाई चटक्कै बिर्सिदिने गरेको छ । जसले गर्दा समाजमा संकुचित र स्वार्थी हुँदै गएको छ ।
वास्तवमा धन हुनु भनेको ठूलो कुरा होइन । सबैभन्दा ठूलो त मन नै ठूलो हो । कुनै व्यक्तिमा अर्बौं सम्पत्ति छ भने उसले आवश्यकता परेको बेला सहयोग गर्न सकेन वा आफूसँग भएको पैसा खर्च गर्न जानेन भने त्यो धन सम्पत्तिको अर्थ छैन । त्यस्ता व्यक्ति आफ्नो सम्पत्तिका कारण बाहिरी रुपमा खुसी देखिए पनि भित्री रुपमा सधैं असन्तुष्टिको आगोमा जलिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको आत्माले शान्ति पाएको हुँदैन । आफूसँग भएको पैसालाई सही रुपमा प्रयोग गर्न जान्यो भने त्यसले उसलाई शान्ति र सन्तुष्ट दिन्छ । मर्दा कसैले पनि केही लिएर जाँदैन । अवस्थाअनुसार र आवश्यकताअनुसार मनलाई खुल्ला राख्न सक्नुपर्छ । मनलाई धेरै बाँधियो भने त्यसले मानिसलाई सधैं बेचैन बनाउँछ । सधैं असन्तुष्ट बनाउँछ ।
नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालमा पैसैपैसा भएका मानिस पनि छन् । र, पेटभरि खान नपाउने पनि छन् । यदि मानिसले आपूmभित्रको स्वार्थलाई त्याग्ने हो भने पक्कै समाजमा सुधार आउनेछ । एउटा धनी मानिसले एउटा गरिब मानिसलाई सहयोग गर्ने हो भने, विदेशमा बस्नेले स्वदेशमा रहेको गरिब व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने हो भने कोही भोकै पर्नुपर्ने छैन । यसले समाजको विकासमा समेत राम्रो प्रभाव पर्छ । यस्तो पनि छ कि अहिले समाजमा व्यक्तिगत रुपमा जतिसुकै खर्च गर्न तयार छ मानिस तर कसैलाई सहयोग गर्नुप¥यो भने मरेतुल्य हुन्छ । एकपटक होटलमा छिर्यो भने ५–१० हजार सिध्याउँछ । तर भोकै परेको व्यक्तिलाई सहयोग गर्दैन । रोग र भोकले तड्पिरहेको मानिसलाई सहयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिंदैन ।
व्यक्तिगत खर्च नगर्नु भनेको होइन । तर, आफ्नो आम्दानीअनुसार केही प्रतिशत समाजका गरिब र अभावमा छटपटाइरहेका व्यक्तिलाई सहयोग गरेमा त्यसले समाजलाई योगदान पुग्नेछ । यसर्थ मेरो विचारमा मन ठूलो हो भन्ने लाग्छ । हुन त मन मात्रै भएर पनि हुँदैन । मन चाहिं छ तर धन छैन भने त्यसको पनि काम छैन । तर, धन हुनेसँग मन भयो भने पक्कै पनि त्यसले समाजलाई अग्रगतिमा लान सहयोग पुग्छ ।
(लेखक– अष्ट्रियाको इन्स्ब्रुकमा विगत दुई दशकदेखि रेष्टुरेन्ट व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ ।)
अग्रज पत्रकार लुइँटेलद्वारा स्थापित अक्षयकोषबाट दुई विद्यार्थी पुरस्कृत
सिम्याटमा सर्वोकृट हुने विद्यार्थीलाई शिक्षादीपको सम्मान
प्रदेश १: मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता
खनाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै
थ्री नेसन्स कपको उपाधि नेपाललाई, बंगलादेश २–१ पराजित
प्रदेश १: माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेतामा इन्द्र आङ्बो